The Best Emulator Android u PC
Hordhac Si Emulator Android:
Emulator Android waa aalad in dhaqmaan sida qalab mobile dalwaddii la nidaamka qalliinka android. Emulator ayaa android kuu ogolaanaysaa inaad tijaabiso iyo beddelo codsiyada android aan la isticmaalayo qalab jirka. Emulator ayaa android daydaa oo dhan oo ka mid ah muuqaalada software iyo hardware celceliska qalab android jirka ah on your computer, laakiin run ahaantii ma aad samayn kartaa oo ku baaqay in iyada oo aad emulator. Emulator siinayaa kala duwan ee navigation oo gacanta ku furayaasha oo aad la falgala adiga oo isticmaaleya isticmaale keyboard ama jiirka. Waxaad screen bandhigay halkaas oo aad codsiga lagu soo bandhigi karo, emulator ku egyahay xidhmooyin buuxa android qalab, xaq hoos marxaladda yaruna, waxaad ka qaadan kartaa waxa model qalabka Android aad u baahan tahay in ay sii wadaan gudahood emulator habka configuring AVDs, iyo aad intaa shakhsiyeeyo karaa mobile ah daloolada qalab iyo maqaarka iyo khariidado muhiim ah.
BlueStacks waa software in kuu ogolaanayaa inaad maamusho codsiyada Android on aad Windows ama Mac PC. Codsiga BlueStacks ayaa si xor ah lagala soo bixi karaa www.bluestacks.com .Taas waxay ka dhigan tahay qof kasta oo qaba PC isticmaalaya daaqadaha ama nidaamka ka hawlgala MAC soo bixi kartaa oo tijaabi codsiyadooda. BlueStacks waa arrin xiiso leh daaqado 8 users kiniin ah, taas codsiyada guud ahaan waa kuwa rabto in aad isticmaasho codsiyada android ay kiniin oo ah PC.
Ka dib markii la rakibey, emulator ka android waddaa on aad PC inta badan codsiyada waa la jaan qaada BlueStacks Si kastaba ha ahaatee wax yar ma aha.
Features iyo hawlaha:
Interface ee ciyaaryahan BlueStacks waa mid aad u fudud oo si sahlan si ay ula falgalaan, waa mid aad u user saaxiibtinimo interface marka aad codsiga waxaad ka heli shaashada la Afar walxood oo la furo.
Codsiyada My: wax kasta codsiga aad soo bixi halkaas waxaad ka helaysaan.
Top gooldhalinta: codsiyada in ay aadka loo qiimeeyo ee ay dadka isticmaala oo lagu talinayaa in duuban.
1 click u hagaagsan, aad si aad telefoon ama kiniin diri kartaa barnaamijyadooda aad.
Codsiga Search: waxaad ka raadin kartaa codsiga ay magaca aad qortid duurka.
Settings Isku dhex
Waxaad aad dooran kartaa goobaha dhexgalka u codsiga, fursadaha ka mid ah wuxuu curyaamin khariidaynta double muhiimka ah, goobaha u tuubada, D-gashto, Kaadhkaaga, Tile iyo Zoom
Goobaha ARJIGA GUUD
Waxaad sameyn kartaa inta badan goobaha codsiga halkan oo ka mid ah waqtiga iyo taariikhda dejinta, beddelo luqad, maaraynta xiriirrada iwm aad
Performance ee BlueStacks waa mid aad iyo sidoo kale waxaa loogu tala galay in uu ciyaaro kulamo badan oo kulan ee ay maamusho in qaab hab aad u fiican oo aan ku xirid kasta, muuqaallo kale waxaa lagu maareeyay si fiican Artur ma at dhan.
BlueStacks wuxuu bixiyaa qaababka sida syncing codsi u dhexeeya codsiga aad daaqadaha iyo telefoonka, kaas oo aad u faa'iido badan. Waxaa la moodayay in ay riixaan barnaamijyadooda aad ka aad codsiga in qalab Xararad aad.
Inkasta oo codsiga waa mid aad u wanaagsan ayaa loo qorsheeyay, laakiin weli waxa uu leeyahay dhowr cayayaanka sida:
Khariidadii keyboard feature uusan si fiican u shaqayn
Waxaad ma Mozilla karaa dhulka google iyada oo xukunka baa'bin.
HAGAHA LOO ADEEGSADO BLUESTACKS Ciyaaryahanka:
Download iyo rakibi ciyaaryahanka BlueStacks ka website www.bluestacks.com . Kaddib markii aad dhameysid rakibo guji codsiga codsiga aad ku bilaabi doonto loading
Marka codsiga la raran aad ku rakiban kartaa codsiyada ay si fudud qoraal ahaan magaca codsiga in tab raadinta ka dib markii la rakibey codsigaaga laga dhisi doonaa oo aan barnaamijyadooda tab halkaas oo aad si fudud u riixi kartaa oo aan bilowno codsigaaga la doonayo.
Haddii aad isticmaalayso codsiyada sida Whatsapp waxaad ku dari kartaa xiriirada in goobaha ay maareeyaan xiriirada doorasho ku daray xiriirada waxaa u hagaagsan doonaa xiriir la buugga WhatsApp.
Haddii aad doorato icon camera codsiga waxaa lagu daahfuri doonaa kamarad iyo camera laptop default ama pc internetka lahaa in lagu shaqeeyo.
Sidoo kale waxaad ka arki kartaa sawirada ee gallery ah oo ku yaalla aad tab weyn ee shaashadda guriga.
WONDERSHARE MIRROR GO:
Wondershare Muraayad go waa emulator ah android oo isku xira in aad dukaamada waaweyn iyada oo la xiriir Wi-Fi ama cable xogta USB ah iyo markii qalab jirka aad ugu xiran yahay software awood doonaa inaad sameyso wax kasta oo aad u lahaa qalab jirka Xararad ugu fiican wax ku saabsan Wondershare Mirror Go waa in aad ka ciyaari kartaa kulan aad hab shaashad buuxda aad keyboard iyo mouse taas oo ka dhigi lahaa aad leedahay waayo-aragnimo ciyaaraha ah sida aad marna ka hor la emulator kasta.
Interface waa user saaxiibtinimo ka dib markii la rakibey waxaad yeelan doontaa interface ah oo ku saabsan screen in waxa aad dukaamada jirka, sidaa darteed waxa ay u muuqataa mid aad u user saaxiibtinimo ee ay jaleecada hore.
Waxaad heli kartaa arji kasta oo la geliyo aad android,
Sida emulators kale ee aad sameyn kartaa gacanta ku dhexgalka aad codsigan aad.
MUUJINTA MUHIIMKA AH:
Waxaad isticmaali kartaa interface si ay u xakamayso android aad pc
Waxaad isticmaali kartaa files in ay ku kaydsan yihiin aad dukaamada android.
Waxaad heli kartaa wax kasta oo app android in la geliyo aad dukaamada android.
Waxaad ku qori karta video ah.
Dhamaan tallaabooyinka yihiin Seme wax alla wixii aad samayn lahayd ee aad casriga android lagu soo bandhigi lahaa aad kombuutarka.
Tusaha Isticmaal MirrorGo
First of dhan aad u baahan tahay si ay u booqdaan www.wondershare.com iyo soo bixi nooca ugu dambeeya ee Mirror tagaan. Download iyo gashato, ka dib markii in aad codsiga lagu daahfuri doonaa idin siinayo interface dukaamada aad shaashad
Waxaad u baahan doontaa in lagu xiro qalabka jirka si aad u codsiga dhex cable xogta la isticmaalo ama Wi-Fi la xidhiidha a.
Ka dib marka aad ku xiran yihiin aad si fudud u isticmaali kartaa arjiga sida aad u isticmaali lahayd qalab Xararad aad.
Isticmaal MirrorGo inuu helo oo Reply Messages on your computer
Waxaad jawaabi kartaa in dhammaan heleen fariimo ku saabsan PC dhex Mirror Go app oo dhan ogeysiin ah in aad hesho in aad qalabka jirka lagu wargelin doonaa in aad codsigaaga ku rakiban ee PC aad u isticmaali kartid keyboard iyo mouse si ay ula falgalaan fariimaha iyo in ay farriimo diri reply.
Isticmaal Mirror Tag Si Play Android Games aad kombuutarka
Waxaad isticmaali kartaa go muraayad u ciyaaro kulan aad kombuutarka si fudud u abuurtaan codsiga ciyaarta ku Mirror tago oo wuxuu ku raaxaysan kulan shaashad buuxda ee aad PC aad u isticmaali kartid keyboard inuu u ciyaaro inta badan kulan kasta oo aad rabto.
Kulan Best android Adult The World ayaa ah in aad ogaato
Sida loo Mirror Wax ka PC in TV
Sida loo isticmaalo Xeon Emulator inuu ciyaaro kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo on PC?
Emulators PSP - Sidee u ciyaaro kulan PSP telefoonka mobile
Sida loo isticmaalo PCSX2 Emulator inuu u ciyaaro Playstation 2 Games ee PC?
The Best 12 iPhone Emualtors u PC, Mac iyo Android
Best 20 Games Dagaal Android
> Resource > Emulator > The Best Android Emulator u PC